Maamulka Gobolka Banaadir oo Hay’adaha amniga ku wareejiyey 10 qof oo Lacago sharci darro ah ka qaadayay Barakacayaasha | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Maamulka Gobolka Banaadir oo Hay’adaha amniga ku wareejiyey 10 qof oo Lacago...
Maamulka Gobolka Banaadir oo Hay’adaha amniga ku wareejiyey 10 qof oo Lacago sharci darro ah ka qaadayay Barakacayaasha
Muqdisho-(SNTV)-Maamulka Gobolka Banaadir ayaa hay’adaha ammaanka ku wareejiyey 10 Qof oo si sharci darro ah Lacago uga qaadan jiray Qoysaska Barakacayaasha ah ee Caasimadda ku nool, si caddaaladda loo mariyo.
Shaqsiyaadkan ayaa si been abuur ah ugu sheegi jiray barakacayaasha inay bixiyaan Lacago, taas baddelkeedana ay siin doonaan Lacago dheeri, iyagoo iska-dhigaya hay’adaha gargaarka.
“Dadkani waxay iska dhigi jireen hey’adaha samafalka ee bixiya gargaarka, iyadoo kooxdan abaabulan ay Dadka ka qaadayeen Sawirro iyo buuxinta Liis ay ku qoran yihiin Magacyada Qoysaskooda, taas baddelkeedana ka qaadan jiray Lacago ay ugu yeeraan diiwaangelin ay ku helayaan gargaar kala duwan”. Ayuu yiri Af-hayeenka Maamulka Gobolka Banaadir, Saalax Xasan Cumar.
Dadka Barakacayasha ah ayaa Maamulka Gobolka Banaadir ku soo wargeliyey dhacdadan, iyadoo 10 kamid ah kooxdan abaabulan Gacanta lagu soo dhigay.
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, C/raxmaan Cumar Cusmaan ayaa uga digay shaqsiyaadka kale ee arrimahan ku howlan in aysan caddaaladda ka fakan doonin, haddii aysan ka waantoobin falalka ay ku dhacayaan Dadka masaakiinta ah.
“Waxaan u sheegaynaa cid walba oo arrimahan ku lug-leh in Caddaaladda aysan ka fakan doonin, Maamulka Gobolka Banaadir-na uu u taagan yahay ilaalinta Nafta iyo Maalka bulshada Caasimadda, gaar ahaan Dadka nugul”.
Laamaha ammaanka ayaa dhowr goor oo hore Gacanta ku dhigay Kooxo abaabulan oo Dadka barakacayaasha iyo kuwa Xaafadaha ku dhaqanba ku dhaca inay yihiin hay’ado gargaar sidaana ugu qaata Lacago diiwaan gelin ah.
Previous articleMaalinta Afrika oo laga xusay Dalka Kuwait
Next articleQaar ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka oo sheegay inaysan Dowladda dhexe fara gelin ku hayn doorashada Koofur Galbeed